कुन-कुन चलचित्रको सुरु भयो छायांकन ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
कुन-कुन चलचित्रको सुरु भयो छायांकन ?
कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउन गरेपछि चलचित्र क्षेत्रका गतिविधि रोकिए । ९ महिनापछि सरकारले सिनेमा हल सञ्चालन र छायांकन अनुमति दिएपछि कोरोनाका कारण धरासायी बनेको चलचित्र क्षेत्र आफ्नो लयमा फर्किन थालेको छ । सरकारले छायांकन अनुमति दिएपछि अहिले धमाधम चलचित्रको छायांकन भइरहेका छन् । यतिबेला बजारमा क्यामेरालगायतका उपकरणहरुको समेत अभाव हुन थालेको छ ।
प्राविधिकहरुलाई दिनहुँ चलचित्र र म्यूजिक भिडियोको छायांकनमा भ्याइनभ्याइ छ । अहिलेका चल्तीका कलाकारहरु पनि १/२ वर्षका लागि प्याक भइसकेका छन् । जसले गर्दा निर्माणको तयारीमा रहेका कति चलचित्रको छायांकन समेत पछाडि सारिएको छ । लकडाउनपछि एक दर्जन बढी चलचित्रको छायांकन पूरा भइसकेको छ भने अहिले फ्लोरमा आधा दर्जनभन्दा बढी चलचित्र छन् ।
करीब २० दिन अगाडि पोखराबाट अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरी स्टारर चलचित्र ‘डिसेम्बर फल्स’ को छायांकन सुरु भयो । नायिका ऋचा शर्माले निर्माण तथा अभिनय गरिरहेको चलचित्र ‘कौसिद’ को पनि अहिले धमाधम छायांकन भइरहेको छ । अभिनेता मुकुन भुषाल स्टारर चलचित्र ‘गणपति’ को छायांकन सुरु भएको पनि २० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ ।
त्यस्तै, अभिनेता पुष्प खड्का र अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाहको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘तिम्रो मेरो साथ’ को छायांकन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले पोखरामा चलचित्रको छायांकन भइरहेको छ । बिहीवारबाट चलचित्र ‘दि सेक्रेट्स अफ राधा’ को छायांकन पनि सुरु भएको छ । यसमा सौगात मल्ल, खगेन्द्र लामिछाने, दयाहाङ राई, निश्चल बस्नेत, सृष्टि श्रेष्ठलगायत छन् ।
चलचित्र ‘हिँड्दा हिँड्दै र ‘चुरीफुरी’ को छायांकन भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । योसँगै अन्य केही चलचित्रका छायांकन पनि अहिले गुपचुप रुपमा भइरहेका छन् । ‘सत्यम्, प्रकाश, जिन्दाबाद, गोर्खा वारियर २, सुदूर, बिहे पास, फटाह फणिन्द्रे, घिन्ताङ, हिमानी, चिसो मान्छे, तिमीसँगै हुने मन छ, बनवास, चिलगाडी, बोक्सीको घर’ लगायतका चलचित्र भने छायांकनको तयारीमा छन् ।